Manjaro 18.1.0 Juhraya ikozvino yawanikwa nekuwanda kugadzirisa | Linux Vakapindwa muropa
Ikozvino inowanikwa Manjaro 18.1.0, yekutanga vhezheni yedistro mushure mekuzivisa kuti ivo vanozove kambani
Vhiki rino, Manjaro Yakazivisa inozove kambani, pakati pezvimwe zvinhu kukwanisa kupa rutsigiro rwakafanana rwunopihwa nemamwe makambani seCanonical kana Red Hat. Ndicho chave chikonzero nei iwo mufananidzo unotungamira ichi chinyorwa wakanditungamira mukukanganiswa: pakutanga, ndaifunga kuti vaizozivisa vhezheni yemaitiro avo emapiritsi, asi kwete. Izvo zvavakazivisa ndeizvi Manjaro 18.1.0, codenamed Juhraya.
Philip Müller anodaro Juhraya Iyo inopa akawanda ekuvandudza ayo akave akaverengerwa mukati memwedzi mitanhatu yekupedzisira yebasa, uye inonyanya kunyatso kuoneka mumahofisi ekunyorera. Munguva yakapfuura zvakavimbiswa kuti Manjaro yaizotora LibreOffice neFreeOffice seye default office suite, asi Manjaro 18.1.0 ichatibvumidza isu kusarudza FreeOffice (yemahara) kubva kuSoftMaker, LibreOffice kubva kuThe Document Foundation kana kusaisa chero.
1 Manjaro 18.1.0 ichatibvumidza kusarudza hofisi suite
2 Zvirinani kubatanidzwa kwedesktop
Manjaro 18.1.0 ichatibvumidza kusarudza hofisi suite
Zvinotaridza pachena kuti imwe yenyaya dzekutanga idzo Manjaro achataura paachave kambani ichave chibvumirano kana kutsigira neSoftMaker, kubvira muna blog post yeJuhraya kuvhurwa kunoisa kwakawanda kusimbisa pane zvakanakira FreeOffice. Pakati pavo, isu tine kuti inonyanya kuenderana neMicrosoft Office uye kuti vhezheni yayo yazvino inosanganisira kutsigira mafomati e LibreOffice kunge ODT. Kunyangwe kana vaine chibvumirano naSoftMaker, chinhu chakanaka ndechekuti ivo vachatibvumidza isu kusarudza izvo zvatinosarudza panguva yekumisikidzwa kweiyo inoshanda sisitimu.
Kune rimwe divi, isu tine (isipo) kurwa pakati peanotevera-gen mapakeji: Flatpak uye Snap. Kugovera kwakadai seUbuntu chete kunosanganisira rutsigiro rwefekitori neCanonical (Snap) sarudzo, uchifanira kuwedzera imwe yacho nemaoko kana tichida kuisa Flatpak vhezheni software. Manjaro 18.1.0 ichaunza nyowani graphical package manejimendi yekushandisa, yakatanga kunzi "fpakman" uye pakupedzisira inonzi "bauh". Na «bauh» tinogona kubata Flatpak uye Snap mapakeji.
Zvirinani kubatanidzwa kwedesktop
Manjaro 18.1.0 ichave ichiwanikwa pamatafura mamwechete neshanduro dzekare. Ose ari Xfce sarudzo, senge KDE uye GNOME zvakagadziridzwa zvakanyanya mukuburitswa uku, kusanganisira maficha akagadzirirwa kuita kuti iyo system nedesktop zvishande mukuwirirana kwakakwana. Kuti uwane izvi, zvinhu zvakaita senge nyowani "Matcha" theme yeiyo Xfce vhezheni (4.14), iyo nyowani KDE yekuzivisa system (Plasma 5.16) uye mabhatani matsva akaunzwa muGNOME vhezheni (3.32).
Avo vanofarira, unogona kudhawunirodha vhezheni itsva yeManjaro kubva pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ikozvino inowanikwa Manjaro 18.1.0, yekutanga vhezheni yedistro mushure mekuzivisa kuti ivo vanozove kambani